Eritrea oo Isku Diyaarineysa Duulan ay Ku Qaado Itoobiya
Buluugleey, Thursday, September 22, 2005
Dowladda Eritrea ayaa maalintii arbacada ahayd u soo jeedisey Qaramada Midoobey in dagaalkii uu dhexeeyey Eritrea iyo Itoobiya uu dib u bilaabmayo haddii QM aysan xal ka gaarin khilaafka xuduuda ee labada dal dhex yaala.
Wasiirka maaliyada Eritrea, Berhane Abrehe, ayaa shirkii golaha loo dhan yahay ee QM oo ay goob joog ka ahayeen 191 dal wuxuu ka yiri “ Waxaan jeclaan lahaa inaan si summad leh aan ku wargeliyo golaha loo dhan yahay ee QM in Eritrea ay ka go’an tahay, xaqna ay u leedahay iney difaacdo oo dhowrto dhamaan dhulkeeda ayadoo adeegsaneysa wax kasta oo u suurtogelinaya ujeedadaas”. Isagoo hadalka sii wata ayaa wuxuu yiri “Haddii aysan QM tilaab cad ka qaadin Itoobiya dhulka ay ka heysato Eritrea eeda dagaalka dib u soo noqda waxey la wadaagi doonta Itoobiya oo labadu masuul ka noqon doona dib u soo noqoshada dagaalkaas iyo wixii qasaara oo dagaalkaas ka dhasha.
Dagaalkii u dambeeyey oo ay wada galaan labadaas dal sannadkii 1999 ayaa inta la hubo waxaa ku naf waayey askar lagu qiyaasay todobaatan kun. Dagaalkaas oo ka bilowmay muran ka dhashay xaduuda labada dal ayaa Itoobiya iyo Eritrea waxey ogolaadeen in QM u saarto guddi dhexdhexaada oo calaamadeeya xuduuda labada dal. December 2000 ayey labada dal waxey ku heshiiyeen in la joojiyo colaadii socotey labada sanno, waxeyna QM kala dhexdhigtay ciidan nabadeed.
Guddigii dhexdhexaadinta oo ay u saartay QM ayaa bishii April 2002 waxey soo saareen go’aankoodii, waxeyna inta badan dhulkii lagu muran sanaa ay u xukmiyeen dalka Eritrea. Eritrea waa ay aqbashay go’aankaas, laakiin waxaa diidey Itoobiya oo ka biyodiidey in dhulka Badme loo xukumo Eritrea, dhulkaas oo ahaa meesha dagaalku ka bilowday. Taas waxey dhalisay in guddiga dhexdhexaadinta labada dal ay dib u dhigaan hanaankii lagu calaameyn lahaa xuduuda u dhexeysa labada dal maadaama ay Itoobiya ku gacanseyrtay go’aankii ay soo jeediyeen.
15ka dal ee ku jira Golaha Amaanka ayaa cambareyn u soo jeediyey dalka Itoobiya bishan September 2005, waxeyna soo saareen go’aan ay u wada dhan yihiin oo ay ugu yeerayaan Itoobiya iney aqbasho go’aankii ay soo gaareen gudiggi loo saarey iney xariiqaan xuduuda u dhexeysa Itoobiya iyo Eritrea, ayna kala baxdo ciidankeeda ku jira dhulka loo xukumay Eritrea.
Itoobiya lagama yaabo iney dhulkaas ka kacdo, aduunyaduna waa aragtay gardarada Itoobiya ay ku hayso wadamada la deriskaa. QM waxey cabsi weyn ka qabtaa in ciidamada labada dal ay mar kale dagaal isugu rogaal celiyaan, qasaare culusna ay isku geystaan. Dalka Itoobiya ayaa aad looga deyrinayaa inuu aad uga liito dhinaca dhaqaalaha, taasna aysan u saamixi doonin inuu guul ciidan ka soo hooyo dagaal uu mar labaad la galo dalka Eritrea oo si wanaagsan uga soo kabsaday waxyeeladii ka soo gaartey dagaal ay horay ula gashay Itoobiya.